Iingcebiso xa ufaka umbala kwiContour epheleleyo yeZirconia-Iindaba-VSmile Co., ltd
Iingcebiso xa ufaka imibala yeZirconia epheleleyo
Ixesha: 2021-02-25 I ngxelo:66
Ukufezekisa indawo kwii-shades ezine-zirconia ezigcweleyo akusoloko kulula. Zininzi izinto eziguquguqukayo ezinokuthi zichaphazele isiphumo sokufumana umthunzi ofanelekileyo. Nazi ezinye izinto ezinokuthi ziqwalaselwe:
Ukufudumeza kobushushu kunokuba nefuthe kwisiphumo somthunzi kunye nokutshintsha kokubuyiselwa okupheleleyo kwe-zirconia. Kumaqondo aphezulu obushushu, uqala ukuphulukana nechroma kwaye ufumane ukuguquguquka. Ukukunceda ufumane i-translucency egqibeleleyo, senze eyethu i-sintering curve eyethu zirconia disc isiseko sohlobo oluninzi kuvavanyo.
Ubuhlalu bokucoca bunokudlala indima kwisiphumo sokugqibela somthunzi wakho onqwenelekayo we-zirconia epheleleyo. Kutshanje sineebhulorho ezimbini zeeyunithi ezi-3 ezikhutshwe ngaphandle kwediski enye ye-Vsmile ST e-zirconia A2 disc, kumjikelo wokudubula ofanayo-enye inee-alumina amaso enye enye ineentsimbi zeZirconia. Uyabona ukuba kukho umahluko ngokucacileyo kulo mfanekiso ndiwuthathe kunye neselfowuni yam ekukhanyeni kwendalo. Elinye lasekhohlo lalicocwe ngamaso e-zirconia abonelela ngokubuyiselwa okuguqukayo ngakumbi apho ekunene kwakucocwe ubuhlalu beAlumina, kubonelela ngokubuyiselwa okungaphezulu.
Presi-haded okanye i-zirconia emhlophe-eya kusivumela ukuba sifezekise iziphumo ezilungileyo?
Xa usebenzisa i-zirconia emhlophe ekubuyiseleni ngokupheleleyo ulwakhiwo, kuya kufuneka uyidibanise neVsmile yombala okhethekileyo wombala. Oku kuyakuvumela umbala ukuba uzalise i-zirconia ukuthintela umbala ukuba usulwe kulo naluphi na uhlengahlengiso oluyimfuneko. Kukho iindlela ezintathu ngokwesiko xa kusetyenziswa ulwelo lombala.
1. Usebenzisa ubuchule bokuntywila udipha iyunithi yokusila kulwelo olufakwe umthunzi naphi na ukusuka kwimizuzwana engama-30 ukuya kwengama-120 kuxhomekeke kwisindululo. Obu buchule yeyona nto ikhawulezayo kwaye ikunika ukubuyiselwa kwemonochromatic.
2. Ibrashi kubuchwephesha iya kukunika iziphumo ze-esthetic ngokulawula ukubekwa. Ixesha elininzi liyabandakanyeka kodwa uyakwazi ukwenza isiphumo sokugqibela unikeze ukubuyiselwa okunje ngokuphila.
3. Inkqubo ye-hybridi isebenzisa indibaniselwano yokuntywila kunye nebrashi kubuchule obunika ukubuyiselwa komzimba kunye nomthunzi we-enamel. Kwaye sicebisa ngamandla.
Xa usebenzisa i-zirconia yangaphambi komthunzi ekubuyiseleni ngokupheleleyo ulwakhiwo, ufumana ithuba lokutsiba ubume bombala obuluhlaza obugcina abasebenzi. Uyakwazi ukubona iziphumo ezingqinelanayo. Ukungancedi kukuba uya kudinga ukongeza ii-shades ezininzi kunye nobungakanani beediski zirconia kwi-inventri yakho kunye nefektri ngexesha lokutshintsha kwediski ukuba awusebenzisi amatye okusila amaninzi.
Vavanya ukuhamba komsebenzi wakho kwaye unqume ukuba loluphi ukhetho olufanelekileyo kwilebhu yakho. Kukho intaphane yezixhobo kumnatha ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo xa kufikwa kumbala we-zirconia ogcweleyo. Bajonge kwaye ufumane eyokusebenzela.
Landela iVsmile, fumana inkqubo yokufaka imibala esebenza kakuhle ne-zirconia yakho oyikhethileyo kwaye uveze igcisa lakho langaphakathi… vumela uthando lwakho lukhanye njengoko uphinda wenze uncumo oluhle emva koncumo!
I-PREV: Ukwenza amazinyo? Masenze ubuGcisa kunye
OKULANDELAYO : Uyikhetha njani i-Lab yeWebhu
Vsmile Preform Milling engenanto
I-Vsmile Acetal yamazinyo engenanto